Translator Newsletter: Ny fandikan-teny tonga lafatra, ny fitoviana ara-kolontsaina sy tantara hafa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jolay 2019 14:11 GMT
Tongasoa eto amin'ity fizarana ny taratasim-baovaon'ny mpandika teny ity! Androany isika dia hiresaka momba ny…
Fitovian-danja ara-kolontsaina amin'ny alalan'ny fandikan-teny
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://phys.org/
Inona no anjara asan'ny fandikan-teny eo amin'ny krizin'ny fifindra-monina izay misy ankehitriny? Ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe, “Fandikan-teny — tetezana eo amin'ireo fiteny izay mampiroborobo ny fitovian-danja ara-kolontsaina“, nilaza i Marcus Tomalin avy ao amin'ny Oniversiten'i Cambridge hoe:
“Mbola tsy misy azo ampilaharina amin'ny fahatsiarovan'ny mbola velon'aina ny krizin'ny fifindramonina amin'izao fotoana, ary mandravaka amin'alahelo fa afa-mampirona ny toe-draharaha ho tonga haingana any amin'ny toerana sarotra ny fahasamihafan'ny fiteny. Mety hahatonga ahiahy sy fifankahalana ny tsy fahafahan'ny mpifindramonina miteny ny fiteny voalohany ao amin'ny firenena iray izorany. Miteraka fisaratsarahana izany fahasamihafana izany ka amin'ny alalan'ny fandikan-teny avy amin'ny fiteny iray mankany amin'ny iray hafa no mampifandray, ary avy amin'ny kolontsaina iray ho any amin'ny iray hafa.”
Vakio ary ampahafantaro anay izay eritreritrareo! Afaka hitarika ho amin'ny fitovian-danja ve ny fandikan-teny?
Ny fahafatesan'ny fandikan-teny ara-antontanisa
Pikantsary nalaina tao amin'ny https://slator.com
Araka ny filazan'ny Facebook, misy fahasamihafana goavana eo amin'ny fiteny ampiasain'ny olona sy ny zavatra tiany hovakiana amin'ny aterineto. Mba hamahana izany, nanomboka nanangana rafitra fandikan-teny mandeha ho azy mifototra amin'ny tambajotran'ny selan-kozatra ny Facebook. Very hevitra? Toy izany koa aho. Toa hoe afaka mahita ny fitoviana ara-kolontsaina amin'ny lahatsoratra voalaza amin'ny fiteny hafa ny fandikan-teny amin'ny milina mifototra amin'ny tambajotran-tselan-kozatra, fa tsy tahaka ny manao fandikan-teny ara-bakiteny. Tsindrio ato raha te-hahafantatra bebe kokoa!
Ahoana no fampisiana tsiro ny fandikan-teninao
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://www.atanet.org/chronicle-online
Arakaraka ny handikako teny no vao mainka tsapako fa marina ny fanambarana hoe: Mba hahatonga anao ho mpandika teny tsara, dia tsy maintsy mahay manoratra ianao. Nametraka ity lisitra goavana ahitana toro-hevitra ity ity ny ATA Chronicle mba tena hanampy ny fandikan-teny ataonao hiavaka tsara. Jereo ary zarao aminay ny anao manokana! Inona no nataonao mba hanatsarana ny fahaizanao mandika teny?
Dikan-teny tonga lafatra: Angano sa azo tanterahana?
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://www.koreaherald.com/
Afaka mandika lahatsoratra avy amin'ny fiteny iray mankany amin'ny iray hafa ve ianao ary mbola mahatsapa fihetseham-po mitovy amin'izany avy amin'ny mpamaky? Milaza i Theresa Hyun, Kanadianina mpampianatra ao amin'ny Fikarohana Koreana sady poeta amin'ny fiteny Koreana fa tsy azo tanterahana izany. Manoratra ny Korea Herald hoe,
“Ho an'i Hyun, tsy azo ihodivirana fa lasa very, miova ary voatovana mandritra ny fandikan-teny ny dika sy fihetseham-po sasany – na dia iray ihany aza ny mpanoratra sy ny mpandika teny.”
Vakio bebe kokoa ato ary lazao anay izay eritreritrareo. Misy ve ny fandikan-teny tonga lafatra?
Toy ny mahazatra, misaotra anareo rehetra noho ny asa mafy ataonareo sy ny fanoloran-tenanareo ho an'ny GV! Raha manana fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra ianao, dia aza misalasa mandefa mailaka ao amin'ny marianna@globalvoices.org.